အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်ရန် - Drill သို့မဟုတ် Screwdriver အတွက်လွယ်ကူချောမွေ့သောတိုးချဲ့နိုင်သော Bit Kit ကိုဝယ်ပါ WoopShop®
လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်ဝက်အူလှည့များအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးချဲ့ Bit Kit
အရောင် 295mm 250mm 132mm
Drill သို့မဟုတ် Screwdriver အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးချဲ့ Bit Bit - 295mm backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
DIY ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ - လျှပ်စစ်
အမျိုးအစား: Indexable Drill Bit
အမျိုးအစား: ချိတ်ဆက်ရိုးတံ Drill Bits ရိုးတံ
လေ့ကျင့်ခန်း: Drill Bit
အရွယ်အစား: 132mm * 1, 295mm * 1, 250mm * 1
Connection hex shank drill bit အရွယ်အစား 6.35mm (1/4 ")
အခွံမာသီးအရွယ်အစား 6.35mm (1/4 ")
ပျော့ပျောင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုးအတွက်လက်ကိုင်လေ့ကျင့်ခန်း၊ torque wind batch အသေးများ၊ ကွေးသောဒီဂရီသည်အတော်အတန်ကြီးမားသောကွေးနိုင်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ မကောင်းသောပုံမှန်အသုံးပြုမှုပြီးနောက်သတ္တုကွေးကွေးခြင်းသည်သတ္တုရိုး၏အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရိုးတံပုံသေနည်းလက်လေ့ကျင့်ခန်း Chuck အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါ့အပြင်လျှပ်စစ်ဝက်အူလှည့အဘို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1 x ကိုချိတ်ဆက်လင့်ခ်
ရက်ပေါင်း ၄၀ ပို့ပေးသည်။ အိတ်တစ်လုံးနဲ့ထုပ်ပိုးထားတယ်။ သူကပျက်စီးမှုမရှိဘဲမောင်း။ ဖော်ပြချက်ကိုက်ညီ။ ကွေးပြီးနောက်ပုံသဏ္Keepာန်စောင့်ရှောက်။ သူကလက်ချောင်းတွေလှည့်ပြီးလက်စွပ်ကိုငုံ့ကြည့်လိုက်တယ်။ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆိုင်အကြံပြုပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေးသည်တစ်စုံတစ်ရာသောအငြင်းပွားမှုကိုချက်ချင်း (၃) ခါ၊ Давнохотелаэтоприспособлениеприобрести, вхозяйствепригодится။ Посылкадошлаза 15 дней, быстро။ СпасибопродавцуиАлиэкспресс
funciona muito bem ။ သူတို့ကို 20 dias em Aracaju ။ ရက်တွေ။
အမှာစာလက်ခံရရှိသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! စီးပွားရေးအတွက်ကံကောင်းပါစေ
132mm မယူပါနဲ့။ ပိုကြာပြီ! 13 စင်တီမီတာအရှည်ကယ့်ကိုသေးငယ်တဲ့